तापक्रम ५० डिग्री पुगेपछि दुबईमा गराइयो कृतिम वर्षा ! कसरि गराइन्छ कृतिम वर्षा ? – Ujyaalo Patrika
तापक्रम ५० डिग्री पुगेपछि दुबईमा गराइयो कृतिम वर्षा ! कसरि गराइन्छ कृतिम वर्षा ?
Previous एकाबिहानै काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का, सचेत रहन आग्रह !
Next भूतले यस्तो सम्म गरेपछि ‘भूत’ को डरले बार्दलीमै सुत्छ यो परिवार